FAMPAHALALANA SY SARY AVY AMIN'NY ALIKA AKOHO-A-CHON - ALIKA
Fampahalalana sy sary avy amin'ny alika akoho-A-Chon
Alika mpihetsiketsika mifangaro Bichon Frize / Cocker Spaniel
Ollie ny fangaro Bichon / Cocker (Cock-A-Chon) tamin'ny faha-3 taonany, nandry teo amin'ny toerana tiany indrindra tao ambadiky ny fandriana! Ankizy mahia izy ary mahay mandanjalanja tsara eo!
Tsy alika madio ny Cock-A-Chon. Lakroa misy eo anelanelan'ny Bichon Frize ary ny Spaniel Cocker amerikana . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Bichon Spaniel
Mpanoratra International Canine Registry®= Cockachon
'Rosco, karazana Bichon Frize sy Cocker Spaniel mifangaro (Cock-A-Chon) amin'ny 19 volana, matory anaty boaty. Sady tsy nilalao tamin'ny kilalao ankafiziny iray, tavoahangy pop foana. Manantena ny fitsangatsanganany amin'ny alina izy. Mahafantatra IZY rehefa amin'ny 9 ora alina. Tiany ny matory anaty koveta fandroana rehefa mafana ny andro any ivelany. Tena miaro tena izy rehefa misy olon-tsy fantatra. '
'Ity i Ginger. Izy no mix Bichon / Cocker antsika izay 13 taona. Tsy tsara tarehy fotsiny izy, hendry, be fitiavana ary ny fialam-boly ankafiziny dia misolelaka!
Teraka tany akaikin'i Toronto, Canada, i Ginger. 20 pounds izy ary tsy milatsaka. Malemilemy sy volo ny volony ary zahan'ny mpitsabo vetivety foana indray mandeha isan-taona. Ny tenanay ihany no mandro sy hikarakara azy ary toa tsy mampaninona azy mihitsy izany.
'Tokony hisy ny sakamalao mandeha isan'andro, toy ny alika rehetra . Faly izy mitsoka sy miarahaba ireo mpiara-monina aminay. Ny namako sy ny mpiara-monina amiko rehetra dia milaza amiko hoe mahafatifaty sy sariaka izy. Ginger dia tia ankizy, olon-dehibe ary alika hafa! Ny sakamalao dia miara-mipetraka amin'ny alika roa hafa koa, purebred Bichons , izay tiany!
'Te hilaza aho fa ny fifangaroana Bichon / Cocker dia manao biby fiompy mahafinaritra ary fianakaviana iray dia fitahiana lehibe ho an'ny fianakavianay nandritra ny 13 taona lasa!'
Toby the Cock-a-Chon toy ny alika kely 8 herinandro (alika Bichon / Cocker mix dog) milanja 4 pounds— 'Feno heriny izy ary mahomby amin'ny fanaovan-tranony. Tianay fotsiny ity zazalahy kely ity! '
Lehibe i Toby! 'Lehibe hatramin'ny 25 lbs izy. ary mbola feno angovo! Toby dia tena mora ny nanao tranobe ary nitondra ny asany rehetra tany ivelany! lol Tiany ireo biby tototry ny entany izay mitabataba. Ny kilalao ankafiziny dia ny reindeer-ntsika izay nantsoinay hoe 'moosey!' Tian'i Toby ny mihinana tehina vatomamy zaza mandritra ny fetin'ny Krismasy. Tianay fotsiny ity zazalahy kely ity! '
Toby ilay Cock-a-Chon (alika mifangaro ao Bichon / Cocker) lehibe daholo
Katie the Cock-A-Chon (Bichon Frize / Cocker Spaniel mix dog) ho alika kely amin'ny 4 volana
Katie the Cock-A-Chon (Bichon Frize / Cocker Spaniel mix dog) ho alika kely amin'ny 4 volana no mitsako ny kilalaony.
Bailey the Cock-A-Chon (Bichon Frize / Cocker Spaniel mix dog) amin'ny 3½ taona
Bailey the Cock-A-Chon (Bichon Frize / Cocker Spaniel mix dog) amin'ny 3½ taona any anaty rano.
papillon Jack Russell terrier Mix
labo mainty antsasaky ny pitbull
ahoana no hahalalana raha tena taratasy akc
Atsinanana Region terrier Mix amin'ny Maltais